लोक सेवाका स्थगित परीक्षा कहिले ? Nepalpatra लोक सेवाका स्थगित परीक्षा कहिले ?
लोक सेवाका स्थगित परीक्षा कहिले ?
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कोरोना (कोभिड–१९) महामारी र पदाधिकारी नहुँदा रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा साउन १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि स्थगित भएका सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन हुने भएको हो ।